टियु मैदानबाहिर देखिएको घुँइचो,आयोजकको गल्ती कि दर्शकमा चेतनाको कमी ?
सूर्य ध्वज तामाङ,नेप्लेज। कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएकाले रंगशालामा भिडभाड नगर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि क्यानले गत मंलबारदेखि घरेलु मैदानमा जारि त्रिकोणात्मक सिरिजमा दर्शकलाई प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय लियो ।
जसका कारण मैदानमा दर्शकको भिड नबढ्ने र कोरोनाको जोखिम पनि कम हुने क्यानको विश्वास थियो । तर त्यसको ठिक उल्टो तब भैदियो जब हजारौँ दर्शकहरु टियु मैदानको बाहिरै उभिएर नेपालको खेल हेर्न आइपुगे ।
अधिकांश दर्शकहरु नेपालको खेल हेर्न उत्साहित देखिन्थे । केही हदसम्म सामाजिक दुरी पालना गरेर मैदान प्रवेश गनै दिनुपर्ने धेरै समर्थकहरुको माग थियो । शनिबार नेपाल र नेदरल्यिाण्ड्सबिचको फाइनल खेलमा त झन दर्शक संख्य सोचेभन्दा अधिक थियो ।
शनिबार परेकाले टियु मैदानको गेटबाहिर भेला भएका दर्शकहरु सबैले मास्क त लगाएका थिए तर भौतिक दुरी भने कायम भएको थिएन ।
सयौँ संख्यामा दर्शकहरु एकै ठाउँमा झुम्मिएर खेल नियालिरहेका थिए भने केही दर्शकहरु रुखमा चढेर नेपालको पक्षमा कराइरहेका देखिन्थे । खेलको समाप्तिपछि मैदानबाहिर पानीका बोतल र चाउचाउका प्लास्टिकहरु छरपष्ट देखिन्थे ।
आखिर यस्तो महामारीका बिच जोखिमलाई वास्तै नगरि किन भेला भए त हजारौँ दर्शक ?
जवाफमा धेरै समर्थकले यो नेपाली क्रिकेटप्रतिको प्रेम भएको बताए भने यसमा आफुहरुको मात्र गल्ति नभएर दर्शकलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको गल्ति भएको बताए । मैदानबाहिर दर्शकको भेला देख्दा मैदानबाहिर भन्दा भित्रै सुरक्षित होला भन्ने भान हुन्थ्यो ।
आखिर जे गरे पनि नेपाली क्रिकेट समर्थकहरुले मैदानमै आएर खेल हेर्न भने छाडेनन् । हुन पनि किन नहोस आफ्नै घरेलु मैदानमा जारी खेल त्यसमाथि पनि नेपाली टिमको उत्कृष्ट प्रदर्शन ।
केही दर्शकले भने मैदान प्रवेश नदिएर सरकारले गलत निर्णय लिएको बताए । आजको मैदानबाहिरको माहोल र र शुरुका खेलहरुमा भित्रको माहोलमा केही फरक थिएन । फरक मात्र आजको खेलमा दर्शकहरु मैदनको काँडेतार बाहिर थिए ।
फाइनल खेलमा त दर्शकलाई बारमा टाँसिन पनि मनाही गरिएको थियो । नेपालको खेलमा मैदानबाहिरै भए पनि कोरोनाको वास्तै नगरि दर्शकको उल्लेखनिय सहभागिताले नेपाली फ्यानहरु क्रिकेटप्रति कत्ति मरिहत्ते गर्छन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएको थियाे ।
तिनै दर्शकको हौसलाका साथमा नेपाली टिम फाइनल खेलमा डच टिमलाई पराजित गर्दै त्रिकोणात्मक सिरीजको उपाधि घरमै सुरक्षित राख्न सफल रह्याे ।